Kacha Mma Salad Salad - Ezi Ntụziaka
otú e si esi nri stuffed ọkụkọ ara
-esi mee ka ude nke ọka ofe
anụ ezi anụ ezi anụ ezi na-eghe eghe
na-atụtụ àkwá dị mma maka gị
Kacha Mma Salad Salad
Kacha Mma Salad Salad bụ nri dị mma ma na-enye ume ọhụrụ jupụtara na nri ọhụụ! Can nwere ike ijere salad a dị mfe n'akụkụ na ihe niile Ezi Tenderloin ka Chkwụ Ọkụkọ E Ghere Eghe .
Site na ọtụtụ nhọrọ dị iche iche na-acha uhie uhie, usoro nhazi salad a dị mfe nwekwara ike bụrụ nri n'onwe ya na protein gị kachasị amasị gị site na oporo Ara Chicken Ara !
Iko 3 akwụkwọ nri ọhụrụ inwetara ole oyi kpọnwụrụ
Ntụziaka salad dị ukwuu nke ebugharị bụ ihe eji arụ ọrụ, nke na-agbanwe agbanwe ma na-amalite site na ihe ndị dị ọhụrụ na nke kachasị njọ! Site na Mfe Italian Salad ka a mfe Kukumba Dil Salad , ha na-eme nri ohuru zuru oke dị ọhụrụ!
Ihe A ga - agbakwunye na Salad Toss
Isi (Elu ma ọ bụ Letus)
Mgbe ị na-eme ka tossed salad malite gị isi… elu! Enwere ọtụtụ nhọrọ! Iceberg letus bụ nnukwu crunchy n'ihi na ọ dị oke mmiri, mana ka nri na agba na-aga, ọ dị n'akụkụ kpochapụwo dị mfe.
Romaine, endive, spinach baby, radicchio, na arugula abughi nani ihe na-enye obi uto na ihe uto, ma tinye ihe di iche iche na salad. Nwere ike ịchọta mkpokọta ahịhịa a na-akpọ 'Spring Mix' na nnukwu ụlọ ahịa mpaghara gị.
Mgbe ị na-ahọrọ nri, gaa maka nchikota agba na textures. Họrọ ihe kemmiri ihe na ihe crunchy ma gbakwunye na egwurugwu nke oroma, uhie na ahịhịa!
ego ole 1 iko osikapa esi sie
Kemmiri ihe - tomato, kukumba,
Crunchy - mgbịrịgba ose, radish, celery,
Tọ - ashara n'ọkụ skwọsh , mkpụrụ osisi, mkpụrụ osisi
Yi - beets, kabeeji na-acha odo odo, karọt karọt
Na-atọ ụtọ - eyịm (akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ / ọbara ọbara / ọcha), ahịhịa ọhụrụ
Ndị na-eme ka nri ụtọ na-eme ka salad gị ghara ịdị na-agwụ ike! Nke a na-agbakwunye na anwụrụ ọkụ, nutty, cheesy flavors.
Oliv (Nicoise, Kalamata, nwa ma ọ bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ) - nnu
Mkpụrụ osisi toasted (ugu ugu, sunflower osisi, walnuts ma ọ bụ almọnd) - nutty (n'ezie)
Anụ ezi - anwụrụ / nnu
Mkpụrụ osisi a mịrị amị - ụtọ, chewy
Chiiz - creamy, nnu (mmiri ara ewu na feta bu ihe nkem)
Croutons ndị a na-eme n'ụlọ
Enwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ ị nwere ike itinye, ọ bụ ihe siri ike ịdepụta ha niile! Kwebe ka imepụta ihe ma gbalịa ịgbakwunye ọkacha mmasị gị na salad a enweghị mgbakwunye na-ezighi ezi ebe a.
Etu esi emefu Salad
Nke a tossed akwukwo nri salad salad bụ chock jupụtara na ahụ ike ị hụrụ n'anya na-enweghị oge na-ewe iji tinye ọnụ. Ana m etinye letus m ma debe ya na ngwa nju oyi maka ụbọchị ole na ole site na ịsacha ya na mmiri oyi, na-enye ya ntụgharị na spinner salad na ịtụkwasị ya na friza akpa na akwụkwọ nhicha ahụ. Dabere na ụdị ọ nwere ike ịdị ọhụrụ maka izu ole na ole.
Iji mee salad tupu oge eruo , kwadebe salad gị a tụbara ma tinye ya n’ime efere. Kpuchie akwa nhicha mmiri na friji ruo awa ole na ole. Ọ bụrụ na ọ ga-anọ ogologo oge karịa elekere ole na ole, kpuchie ya na plastik.
Kedu Uwe Uwe Na-aga Na Salad Achịbiri?
Vinaigrette dị mfe bụ naanị ihe ịchọrọ iji wepụta ụtọ flavụmentị nke mpaghara ọ bụla na salad a. N'ime ite ma ọ bụ salad na-eme ka ụgbọ mmiri, ghaa mmanụ oliv, mmanya (cider, balsamic, ma ọ bụ ọcha), mmanụ a someụ na ịmị nnu na ose iji detụ ire ma jiri nwayọ gbakwunye na salad.
ọ dịghị akpọọ nkụ ugu cheesecake Ogwe Ntụziaka
Uwe Ndị Ọzọ Na-amasịkarị M
Uwe Italian - Akwa dị ka mgbakwasa ma ọ bụ marinade
Uwe Blue Chiiz - Creamy na mfe
Mmanụ a Mustụ mustard - Sweettọ na zesty
Balsamic Vinaigrette - Omuma ekpomeekpo
Mgbakwunye Buttermilk Ranch - Creamy na-atọ ụtọ!
Oge Nkwadebeiri na ise Nkeji Oge zuru ezuiri na ise Nkeji Ọrụ4 servings Onye edemedeHolly Nilsson Nwere ike ịhazi salad a na ihe ọ bụla ị nwere ike iji aka gị mee ka ọ bụrụ ụzọ zuru oke iji jiri anụ ọhụrụ gị! Bipute Ntụtụ
▢8 iko letus
▢1 iko kukumba
▢1 iko tomato
▢1 iko mbuaha inine radish, shredded karọt, odo odo kabeeji
▢abụọ tablespoons almọnd ma ọ bụ sunflower osisi toasiri
▢¼ iko mmanụ oliv
▢abụọ tablespoons mmanya gbara ụka cider, balsamic ma ọ bụ ọcha
▢1 ngaji mmanụ a honeyụ
▢oge nnu & ose nụrụ ụtọ
Debe ihe niile salad na nnukwu efere.
Debe ihe eji edozi n'ime obere efere ma kpochaa ya ruo mgbe agwakọtara ya.
Itu salad na mgbakwasa nụrụ ụtọ na-eje ozi ozugbo.
Calorisị:214,Carbohydrates:iri na iseg,Protein:4g,Abụba:16g,Abụba Ajuju:abụọg,Sodium:38mg,Potassium:468mg,Eriri:4g,Sugar:5g,Vitamin A:3370IU,Vitamin C:Ugboro 14.9mg,Calcium:59mg,Iron:1.5mg
IsiokwuToss Salad N'ezieSalad, Akụkụ nri Esie yaOnye AmericaEnd SpendWithPennies.com. Ọdịnaya na foto bụ ihe nwebisiinka. Kekọrịta nke uzommeputa a gbara ume ma nwee ekele. A machibidoro ibipụta na / ma ọ bụ ịzigharị usoro nri zuru oke na mgbasa ozi ọhaneze. Biko lee iwu ojiji iji foto m ebe a .
Gbanyụọ Ntụziaka Salad a Dị Mfe